Dhaddacha hoggana ABO irratti ragaaleen ittisaa akka hinargamne dhorkaman – Kichuu
Dhaddacha hoggana ABO irratti ragaaleen ittisaa akka hinargamne dhorkaman.
Gabaasa har’a arganneen ragooleen ittisaa hogganaa ABO Abdii Raggaasaa shira qaamolee PP xaxaniin dhaddacha irraa hanbifamuutu himame. Dhaddacha hoggana ABO kanaa irratti ragaan ittisaa dhaggeeffatamuuf turullee gabaasni arganne akka ifa godhutti danqamuu isaaniidha.
Kun beellama mana murtii Wiixata har’aa Ebla 5, 2021 oole yoo ta’u, Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO jaal Abdii Raggaasaa Mana murtiitti dhihaachuuun Ragoonni ittisaa isaa waan dhihaachuufii dadhabaniif beelamni dabalataa gaafa 13/8/2013 akka habashaatti beellamni qabamuu odeefdanne.
Ragoolee ittisaa danqaan adda adda hanbise akka odeeffannetti
1. HD ABO Daawud Ibsaa Ayyaanaa
2. Qondaala siyaasaa ABO col.Gammachuu Ayyaanaa fi
3. Qondaala Siyaasaa ABO Waaqoo Noolee yoo ta’an; raggoonni ittisaa jaal Abdiin akka dhihaataniifiif
Mana murtii irraa Abukaatoon isaa xalayaa akka barreesisuuf taasifamee, xalayaan barraayeefii Xalayichi dhaqqabuu dadhabuun beelama har’aa irraa hafan jedhame. Ragooleen ittisaa danqaa uumameen hafan
Danqaa uumamee sababa hafuu Ragoolee ittisaa ta’es dhihaachuu dadhabuu, Jaal Daawud Ibsaa fi jaal Waaqoo Noolee sababa ifa hin ta’iniif namoonni Mana jireenyaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa jiran mooraa keessaa gadi bahuu fi alaa gara mooraa seenuu waan dhoowwamaniif Xalayaa manni murtii isaaniif barreesse kana biraan gahuu akka hin danda’amne guyyaa har’a mana murtiitti Abbaa Seeraatiif Abukaatoon seeraa Obbo Tuuliin himaniiru jedhame.
Bifuma wal fakkatuun , Xalayaan manni murtii col. Gammachuu Ayyaanaatiif mana sirreessaa Qiliinxootti barreesse mallattoo Abbaa Seeraa hin qabu jechuun mooraa Qiliinxoo irraa Col. Gammachuun akka hin dhihaanne taasifameera jechuun Abukaatoon jaal Abdii mana murtiitti ifoomseera jechuun gabaafame
Walumaa gala danqaa qaamolee PP uumaniin ragooleen ittisaa hoggana ABO kun dhiyaachuu dhabuudhaan ammas beellamni dabalataa akka irratti qabamu taasifameera jedhame.
Hogganoonni ABO, Qobdaalonni, miseensonni fi deggartoonni ABO hedduun mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta’u, hidhaa seeraan alaa manni murtii bilisa yoo baasellee qaamolee Foolisiin akka hidhaman gabaasaa turree jirra.